Madaxda Koonfur Galbeed, Galmudug & Hirshabeelle oo shir uga furmay Baydhabo – HalQaran.com
Madaxda Koonfur Galbeed, Galmudug & Hirshabeelle oo shir uga furmay Baydhabo
Baydhabo (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uga furmay shir wadatashi ah madaxweynayaasha maamullada, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Saddexdaan maamul goboleed ayay kulankan uga hadlayaan arrimo dhowr ah iyo sidii ay mowqif mideysan ay ula tegi lahaayeen kulanka uu beri ku marti qaaday Madxweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Galmudug, Qoor Qoor oo hadal ka jeediyay shirka maanta uga furmay Baydhabo ayaa sheegay, in madaxda saddexda maamul lagu xanto inay wadashaqeyn la leeyihiin Madaxda DF Soomaaliya, hayeeshee arrintaasi ay aad ugu faraxsan yihiin.
Qoorqoor ayaa intaasi raaciyay, in madaxweynayaasha maamullada Jubbaland iyo Puntland oo uu sheegay in iyada oo ra’iisul Wasaare la Magacabin aysan meelna tegin, hayeeshee ay yimaadeen Magaalada Muqdisho, waxaana uu ugu baaqay inay qorsho cad la yimaadaan.
Ugu dambeyn, gunaanudka Shirka u dhaxeeya Madaxda Dowlad Goboleedyada, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay Warmurtiyeed ka soo saaraan shirkooda, islamarkaana ay soo gaaran magaalada Muqdisho si ay uga qeyb galaan shir uu ku casuumay Madaxweynaha JF Soomaaliya Farmaajo.
Tags: Galmudug, HirShabeelle, Koonfur Galbeed, madaxda dowlad goboleedyada, Shir uga furmay Baydhabo